Ukuqhekeza kwi-eCommerce kunye neevenkile | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 10, 2007 NgoLwesithathu, Novemba 30, 2011 Douglas Karr
Le veki ibiyiveki yam yokuqala njengoMlawuli weTekhnoloji Indawo yokuphumla. Inkampani encinci yetekhnoloji, iPatronpath sele inefuthe elikhulu kwishishini loku-odola kwi-Intanethi.
Ngokungafaniyo nezinye iinkampani, iPatronpath ijolise kwisoftware yabo kumava omsebenzisi kunye nokudityaniswa. Endaweni yokwenza isoftware yomthengi, bagxile ekuphuhliseni isoftware yomsebenzisi.
Inkampani yenze umsebenzi omangalisayo ekukhuleni nakwitekhnoloji enikwe into yokuba abanayo itekhnoloji enkulu 'ephethe' usetyenziso. Ndithethile nomphathi omkhulu u-Mark Gallo namhlanje kwaye andinakho ukuchaza indlela endichukumiseke ngayo.
Inkampani iye yaqina, yatshintsha ngokukhawuleza ishishini labo kwiindawo apho ii-Restaurateurs zifuna zona kakhulu. Iqela apho liyamangalisa. Ulwazi lwabo kumzi mveliso yinto eyenza yonke into isebenze kwaye yintoni eyakha inkampani enkulu.
Ukujonga kwiShishini lokutyela, unokucinga ukuba ndingamantongomane ukutsiba kule gig. Isiqingatha sazo zonke iivenkile zokutyela siyasilela kunye nomda wenzuzo kwi-non-chain, indawo yokutyela yosapho ikhohlakele. Umahluko phakathi kwevenkile yokutyela ephumeleleyo kunye nendawo yokutyela engaphumeleliyo ungacutheka njengenwele… kulapho iPatronpath ingena khona. Ukongeza uku-odola kwi-intanethi kwivenkile yokutyela ukuze kuphume kunye / okanye ukuhanjiswa yeyona nto iqhubela phambili ishishini phambili ngoku.
Yiyo loo nto iiOdolo ezikwi-Intanethi zenza umahluko:
Abantu baodola ukutya okungakumbi xa be-odola ukuthatha kunye nokuzisa. Cinga ngayo… xa usapho lwakho usiya kwindawo yokutyela, u-odola ipitsa etafileni. Xa u-odola ukuhanjiswa, uya-odola ngokwaneleyo isidlo sakusasa okanye i-snack yasebusuku, nayo!
Abantu bafuna lula ngakumbi nangakumbi. Iivenkile zokutya ziyavalwa kwaye imixokelelwane yokutyela ikhula. Isizathu silula, sifuna ukuchitha ixesha elininzi kunye nosapho lwethu sinikwe indlela yethu yokuphila exakekileyo kunye nexesha elincinci lokuthenga nokupheka. Ukuba ungafumana isidlo esikhulu sosapho lwakho kwaye usikhuphe endleleni egodukayo, kutheni kungenjalo!? Ukutyela ngaphandle kungxamile… kodwa ukuvula ukutya ngasese kwikhaya lakho kusavumela usapho ukuba luqokelele ndawonye.
Inkqubo enkulu yoku-odola kwi-Intanethi inciphisa iimpazamo zoku-odola kwaye ithatha nezixhobo ezincinci zabasebenzi ngokunjalo! Kunzima ukuphazamisa iodolo xa nguwe oyidibanisayo, akunjalo?
Usemninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe, nangona kunjalo. Inkqubo ye- POS Iinkqubo zisaxakekile. Ngena kwindawo yokutyela ephakathi kwaye uyakufumana i-POS eyomeleleyo esebenzayo kwiWindows 95 kunye nokusebenza kwesiseko sedatha sokuFikelela! Ngokuqinisekileyo, kukho isikrini sokuchukumisa esipholileyo… kodwa ishishini livuthiwe ukuba umdlali onomdla angene kwaye acoce indlu.
Iinkqubo zoku-odola kwi-Intanethi zenza umahluko. Sebenzisa APIs nge-POS, ifeksi, kunye nokudityaniswa kwe-imeyile - abahlaziyi basimahla benza eyona nto bayenzayo… bathengise ukutya okuninzi kunye nenkonzo ngelixa besongeza iiodolo ezingaphezulu nangaphezulu! Kulapho singene khona. Sinezicelo ezikhulu ekufuneka uzibonile ukuze uzikholelwe. Inkampani kunye nomzi mveliso zilungele ukuthatha kwaye siza kuba zezona zibalaseleyo!
Apha e-Indianapolis, sisebenzisa isoftware yethu nge Indawo yokutyela yaseScotty.
Hamba uye nakweyiphi na iScotty kwaye uyakuqaphela kwangoko ukuba amava ayimalunga nomsebenzisi kunye nokudibanisa itekhnoloji. Kuni balandeli beColts, sonke isihlalo eScotty sisihlalo sangaphambili kuba idokodo ngalinye linomabonakude weLCD! Qiniseka ukuba uyabajonga nesidlo sasemini… banemenyu enkulu eyi- $ 5!
Qiniseka ukuba ubaxelela ukuba uDoug usuka Indawo yokuphumla ndikuthumele!
Agasti 22, 2007 ngo-10: 33 PM
Ndenze useto lweapps zikaGoogle ezimbalwa kodwa nge-imeyile kuphela.
Into yokuqala kwiphepha oyenzileyo ibonakala icocekile.
Kuya kufuneka ndizame loo nto
Meyi 28, 2012 kwi-4: 23 PM
Ndibone isisombululo esitsha esibizwa ngokuba kukutya kwi-Intanethi ekubonakala ukuba sinjalo
ngokukhawuleza nangakumbi nangaphezulu kunabanye, ukhe wayibona?